China Stylish Diaper Bag Organizer for Moms orinasa sy mpanamboatra |Flyone
lanja entana:1,4 kg
Haben'ny vokatra:16.1*4.7*13.4 santimetatra
Kitapo Diaper Large Capacity: Ny kitapo diaper dia misy paosy 12 amin'ny fitambarany, paosy 2 amin'ny lafiny hafa, efitra hafa.Omeo toerana ampy ho an'ny diaper, fanovana pad, lakile, poketra, makiazy, akanjon-jaza sy ny sisa mba hahatonga ny zanakao hitandrina ny filaminana tonga lafatra.
Fashion Mommy Diaper Bag: Mampiasa lamba oram-panala mateza tsara kalitao, mora diovina;mitafy fanoherana, fanoherana ny deformation, multifunction diaper kitapo tsy misy sorona lamaody famolavolana hevitra manome ny safidy tsara indrindra ho an'ny reny sy ny dada.
l NATAON'NY RAY AMAN-DRENY HO AN'NY RAY AMAN-DRENY — Ny efitrefitra tsirairay sy ny zavatra napetraka ao anatin'ity kitapo misy diaper ity dia natao hanatsorana ny fiainanao amin'ny maha-ray aman-dreny anao.Efitrano lehibe iray fanampiny no mifanentana amin'ny entanao lehibe indrindra ary ny paosy kely kosa dia miantoka anao hijanona ho voalamina.Grand Central Station Diaper Bag dia mijoro mahitsy mba hidirana mora amin'ny efitrefitra lehibe rehefa manova diaper ho an'ny zanakao.
Anaran'ny vokatra Diaper tote
Laharan'ny entana LH020
Fisokafana malalaka, fijery mazava
Fisokafana midadasika hanamora ny fiainana, satria afaka miditra amin'ny zavatra rehetra tsy misy manahirana ianao, ary mahita ny entana rehetra amin'ny fotoana rehetra.
Fandaminana eo anoloana
Azonao atao ny mandamina ny zavatra manan-danja indrindra ao amin'ny paosy eo anoloana, toy ny tavoahangy zazakely na zavatra hafa, mba hidirana mora.
Zipper avo lenta
Mampiasa zipper avo lenta izahay izay mahafeno ny fenitra iraisam-pirenena momba ny famokarana.
Ny ampahany tsy misy simika
Mampiasa kojakoja vy efa voasedra sy mavesatra ihany izahay mba hiantohana ny fiarovana anao sy ny zanakao, fa ny ankamaroan'ny marika hafa dia mampiasa kojakoja mora sy tsy azo antoka.
Izy io dia manana endrika mirindra, fanorenana lehibe & ny fiasa rehetra ilain'ny ray aman-dreny ao anaty kitapo.Ity kitapo ity dia manana ny endri-javatra tsy maintsy ananana rehetra ao anatin'izany ny paosy 12 ho an'ny fandaminana
teo aloha: Kitapom-behivavy diaper lehibe, kitapom-behivavy mahazaka rano ho an'i Dada i Neny
Manaraka: Super Purchasing ho an'ny China Large Diaper Bag Baby Nappy Tote Bag Maternity Diaper Shoulder Bag Organizer Multi-Function Travel Backpack with Strap
Kitapo mangatsiatsiaka rononon-dreny (Tazony efatra 5 ounces nono...
Diaper reny mahavelona maharitra maharitra ...
Premie mihantona diaper caddy mpandrindra fanovana...
Multifunctional Car Seat Mpiaro Seza aoriana na...